बजेट सक्न दैनिक ४० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने !
२०७५ असार २५ सोमबार ०७:५८:००
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष समाप्त हुन ८ दिनमात्र बाँकी रहँदा कूल बजेटको ६९.३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । आव २०७४–७५ मा सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म १० खर्ब पनि खर्च हुन नसकेको हो ।
महालेखा नियन्त्रका कार्यालयका अनुसार शनिबार साँझसम्म सरकारको ढुकुटीबाट कूल ९ खर्ब ५५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । त्यसमध्ये ६ खर्ब ७० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ चालूतर्फ, १ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुँजीगततर्फ र ९२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च भएको हो । यो खर्च सोही शिर्षकमा गरिएको खर्च अनुमानको क्रमशः ८३.३९, ५७.४३ र ६६.१८ प्रतिशत हो ।
यसहिसाबमा चालू आव समाप्त हुन ८ “वर्किङ डेज” मात्र बाँकी रहँदा सरकारको ढुकुटीबाट अझै ३ खर्ब २३ अर्ब ५८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ । तसर्थ, एकदिनमा प्रतिदिन ४० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको हो ।
यता पछिल्लो २ साता राष्ट्रिय ढुकुटीबाट प्रतिदिन ५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भुक्तानी भएको छ । यो खर्च÷भुक्तानी यसअघिको भन्दा उच्च नै भएपनि यही रफ्तार बजेट खर्च अनुमान भेट्टाउन पर्याप्त भने छैन । हालसम्म भएको ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँको खर्चमा प्रतिदिन ५ अर्बको हिसाब गर्ने हो भने अन्त्यसम्म ९ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुने देखिन्छ ।
यता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आवको अद्र्धवार्षिक समिक्षा गर्दै बजेट अनुमान घटाएर संशोधित खर्च बजेट वक्तव्यमा गरिएको अनुमानको ८१ दशमलव ८ प्रतिशत (१० खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ) हुने बताएका थिए । यसअर्थमा पछिल्लो समयमा भएको औसत खर्चको अनुमानमा पनि बजेट भुक्तनी हुने हो भने आव समाप्तिसम्म हुने भने संशोधित अनुमान बराबरको खर्च हुन पनि धौ धौ छ ।
सरकारी खर्च समग्रमै कम हुने देखिँदा पुँजीगततर्फ हुने खर्चको अवस्था भने झनै नाजुक देखिएको छ । विनियोजित अनुमानको ७१.२ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएकोमा ८ दिन बाँकी रहँदा ५७.४३ प्रतिशत (१ खर्ब ९२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ) खर्च भएको हो ।
यसको अर्थ यो वर्ष पनि अन्तिम साता ठूलो मात्राको बजेट निकासा हुने पक्का छ । वर्षको अन्तिम समयमा निर्माणतर्फ हुने ठूलो मात्राको भुक्तानीले यसवर्ष पनि अन्तिम सातामा हुने खर्चको क्रमले निरन्तरता पाउने देखिन्छ । लक्ष्यकै हिसाब गर्दा दैनिक ५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ नै पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, पछिल्ले दुई साता औसतमा २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
तर, पहिले नै काम सम्पन्न भइसकेका कतिपय आयोजना तथा निर्माण कार्यको भुक्तानी पनि असार २५ भन्दा पछि हुने भएकाले यसबेला बजेट खर्च उच्च हुने मन्त्रालयको दावी छ ।
मन्त्री खतिवडाले अद्र्धवार्षिक समिक्षामा गरेको संशोधनअनुसार चालूतर्फ विनियोजनको ८७.१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७७.२ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।
यता आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन नजिकिँदै जाँदा सरकारलाई दिन प्रतिदिन लक्षित राजस्व उठाउन झनै मुस्किल देखिएको छ । शनिबार साँझसम्म उठेको राजस्वलाई हेर्दा लक्षित राजस्व उठाउन मात्र दैनिक ८ अर्बका दरले राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ । शनिबार साँझसम्म सरकारले लक्षित राजस्वको ९० प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको बजेट तयार गर्दा ७ खर्ब ३० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, अद्र्धवार्षि समिक्षामा त्यो घटाएर ७ खर्ब २८ अर्ब बनाइएको थियो । असार २३ गतेसम्म सरकारले जम्मा ६ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
शनिबार साँझसम्म सरकारको कूल बजेट घाटा २ खर्ब ८८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।